१९ बर्षिय युवतिले बनाइन् बलात्कार हुनबाट बचाउने यस्तो पेन्टी ! दुनिया भयो चकित ! – AB Sansar
October 9, 2020 adminLeaveaComment on १९ बर्षिय युवतिले बनाइन् बलात्कार हुनबाट बचाउने यस्तो पेन्टी ! दुनिया भयो चकित !
काठमाडौ – भारतकी एक युवतीले यस्तो पेन्टी बनाएकी छिन्, जसले युवतीहरुलाई बलात्कारबाट बचाउन सक्छ । १९ वर्षकी सीनू कुमारी उत्तर प्रदेशको र्फरुखाबाद जिल्लाको एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका हुन् । उनले बनाएको ‘रेप प्रुफ पेन्टी’मा एक प्रकारको लग लागेको हुन्छ, जसले बलात्कारबाछ बचाउनसक्छ । ब्लेड प्रुफ कपडा प्रयोग गरिएको छ जसलाई काट्न वा जलाउन सकिँदैन । साथै स्मार्ट लक, जीपीआरएस र एक रेकर्डर पनि छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
बीग बोस विजेता सिद्धार्थ शुक्लाको निधन !!